Umuthi 'D Panthenol "senziwa ngesimo amafutha noma ukhilimu. Ukhilimu kanye wamafutha 5% eyohlobo, ne iphunga isici ethize, asetshenziselwa lokusebenza langaphandle. Per 1 g ukhilimu (yokugcoba) I-50 mg dexpanthenol.
Cream ezimhlophe, liphethe ezifana ejenti asizayo njengoba cetearyl octanoate, ketomakrogol, cetanol, glycerin monostearate, dimethicone, propylene glycol, propyl parahydroxybenzoate, metilparogidroksibenzoat, isithokela Seaside, amanzi ahlanzekile.
Wamafutha yokukhanya umbala ophuzi nge iphunga evelele of lanolin. kukhona petrolatum ezimhlophe Phakathi yezingxenye asizayo zomuthi kukhishelwa ngesimo yokugcoba, lanolin anhydrous, upharafini liquid, cholesterol, myristate isopropyl, propilparogidroksibenzoat, metilparogidroksibenzoat, amanzi ahlanzekile.
izidakamizwa Itholakala ibhokisi lapho tube 25 tigrammovaya ukhilimu noma wamafutha "D Panthenol" imfundo manual. Lesi sidakamizwa, okuyinto isenzo ngokuyinhloko ku izicubu ukuvuselelwa kanye ngcono trophism. Lolu hlelo lokusebenza izidakamizwa nezimo kakhulu. Ngokwesibonelo, kuyasiza induna, kanye ezisicasulayo kanye imihuzuko, ukusha kanye isikhumba chapping, njll
Njengoba unamathele izidakamizwa "D Panthenol" imfundo on isicelo ikuvumela ukuba bajwayelane wesenzo kwemithi. Dexpanthenol kuyinto esuselwe pantothenic acid nakho, kuyinto Vitamin B iqembu. Lo vithamini kuyadingeka njengengxenye coenzyme A for fat, amaprotheni kanye carbohydrate umzimba. Ngaphezu kwalokho, indima ebalulekile it udlala acetylation at gluconeogenesis, eqhekeza kanye synthesis-fatty acid, ukukhululwa amandla amaningi avela carbohydrate, synthesis amahomoni steroid sterol acetylcholine.
Ngenxa izici pantothenic acid EPITHELIAL zisekelwa evamile. Uma isikhumba noma izicubu zilimele, umzimba kukhona nokwanda isidingo ke. Ezimweni ezinjalo ukuntuleka pantothenic acid zingenziwa phezulu isicelo sendawo zomuthi "D Panthenol". Yokusetshenziswa ivumela izakhiwo wokufundwayo futhi kabusha zomuthi. Kuyasiza ukubuyisela isikhumba, kwandisa ngamandla collagen ethandele, kuphumele ukuzinza umzimba amaselula. Umuthi has kancane ukusebenza eqeda ukuvuvukala, Usenza sizole futhi uyasondla isikhumba. Ngenxa izinto asizayo ekhona wokulungiselela, ekuthuthukiseni izindawo zayo zokwelapha.
Ngenxa ongaphakeme isisindo yamangqamuzana, polarity ongaphakeme futhi hydrophilicity kusho "D Panthenol" zonke izinto zalo okusebenzayo eyenza umuntu acabange eseZwini kahle zonke izingqimba kwesikhumba.
Endabeni ukulimala uma ziqhathaniswa futhi odokotela bavame ukutusa a "D Panthenol» isikhumba. Ukusetshenziswa kwalesi izidakamizwa itholakala nge:
- kwenzeka abantwana bakwa inabukeni dermatitis, imihuzuko, encane esicasulayo nokusondelana ilanga, x-ray kanye emisebeni ultraviolet, kanye nokwelashwa of inabukeni amawala;
- ukubukeka imifantu izingono ka nabancelisayo noma ukuvuvukala yabo;
- ukuvuvukala isikhumba, amathumba, dermatitis, izilonda emithambo yegazi wemikhawulo aphansi, inakekelwa esikhumbeni azungeze tracheostomy, ipayipi lokukhipha indle, gastrostomy;
- nokwelashwa imiphumela. elihlobene ne nemiphumela emibi isikhumba ezintweni ezifana nokubanda komoya, abandayo, umswakama, njll ..
Ngaphandle kwakho konke lokhu okungenhla, ukulungiselela kahle kusisiza "D Panthenol" induna.
Njengoba unamathele izidakamizwa "D Panthenol" imfundo on isicelo ikuvumela ukuba simazi kangcono indlela yokusetshenziswa kwawo. Ngakho, wamafutha noma ukhilimu lisetshenziswa ungqimba elincanyana phezu izingxenye ezilimele izikhathi 4 ngosuku (ngaphezulu kungaba kunesidingo). Uma ebusweni elinegciwane, ngaphambi isicelo zomuthi "D Panthenol" kubalulekile ukuba asingathe isinqandakuvunda ngokucophelela. Izinsana imithi isetshenziswa ngesikhathi ushintsho kwezingubo zangaphansi ngamunye noma ngemva ebhukuda.
Umvuthwandaba: izimpawu. ukwelashwa kwama-hormone kwabesifazane
Glycine kanye notshwala: kwedivayisi nemiphumela Izibuyekezo
"Palniks" ekotishi emzaneni (Ekaterinburg, Upper Iset wesifunda, 4 km Chusovskoy ipheshana): Incazelo
"Peugeot 307 SW": Ukucaciswa, ukubuyekezwa